Home » သတင်း » PHABRIX Sx TAG အိတ်ဆောင် Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI Generator ကိုနှင့် Analyzer များအတွက် SMPTE ST 2110 ပံ့ပိုးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
PHABRIX Sx TAG အိတ်ဆောင် Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI Generator ကိုနှင့် Analyzer များအတွက် SMPTE ST 2110 ပံ့ပိုးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
Berkshire, ဗြိတိန် - စက်တင်ဘာ 13, 2017 - PHABRIX ပါဝင်သည်ရန်၎င်း၏ Sx TAG ခရီးဆောင်စပ်အိုင်ပီ / SDI မီးစက်နှင့် Analyzer ၏ IP ထောက်ခံမှုတိုးမြှင့်နေသည် SMPTE 2110G အပြင် ST 2022 အဖြစ် 6-3 /HD/ SD က-SDI, optical SDI နှင့် analogue ။
"ကျနော်တို့ကမိတ်ဆက်ပါတယ် SMPTE ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sx နှင့် Qx များအတွက် ST 2110 ထောက်ခံမှုထုတ်လွှင့် SDI နှင့်စပ် SDI / IP ကိုစစ်ဆင်ရေးကနေအနာဂတ်မှာ၏အပြည့်အဝအိုင်ပီ-based အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Workflows ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်နေကြပါတယ် "နီးလ်ရှပ်, PHABRIX မှာစျေးကွက်၏ဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များ Sx TAG ခရီးဆောင်တူရိယာ၏ decapsulation / encapsulation တွေကိုသေချာပူဇော်ပါလိမ့်မယ် SMPTE ထုတ်လွှင့်စနစ်များအတွက်လျင်မြန်စွာအမှားတွေ့ရှိချက်များနှင့်လိုက်နာမှု testing အတွက် ST 2110 နှင့် ST 2022-6 ။ "
အဆိုပါ Sx TAG ကိုထောကျပံ့ဖို့ SFP + module တွေတပ်ဆင်နိုင်ပါသည် SMPTE အဆိုပါရထား, synchronize လုပ်ပေးတဲ့နှင့် Real-time ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက် application များအတွက် IP ကိုကျော်သီးခြားမူလတန်းအနှစ်သာရစီး၏ဖော်ပြချက်သတ်မှတ်ပါတယ် ST 2110 ။ အဆိုပါအိုင်ပီ status ကိုပု Sx TAG မယ့်စောင့်ကြည့်မှု toolsets အတွင်းတင်ပြထားပါသည်, သစ် TX / RX တူရိယာပြတင်းပေါက်ကွန်ယက်ကို Configuration နဲ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါတူရိယာတစ်ခုအလိုလိုသိ, color-coded interface ကိုကနေကြံ့ခိုင်လွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှုကိုစမ်းသပ်နှင့်တိုင်းတာခြင်းပေးပါသည်။
16 screen နှင့် 9-channel အသံစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: အဆိုပါ mains- နှင့်ဘက်ထရီ-powered Sx TAG ဗီဒီယို 16 သုံးပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ multiformat waveform နှင့် vectorscope အပါအဝင်အခြေခံအဆောက်အဦများလိုက်နာမှုစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ content စောင့်ကြည့်ရေးအတှကျအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tools တွေကိုထည့်သွင်း။ သည်အခြားအဆင့်မြင့် features တွေ Dolby (R) E ကို, Dolby (R) ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Dolby (R) ဒစ်ဂျစ်တယ် Plus အား bitstream နဲ့ audio AES မျက်စိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ် Ethernet ကျော်ဝေးလံခေါင်ဖျားစစ်ဆင်ရေးများပါဝင်သည်။
အဆိုပါ Sx TAG အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.phabrix.com.
PHABRIX လျင်မြန်စွာအမှားရောဂါ, လိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခရီးဆောင်နှင့် rackmount စနစ်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအားသာချက်အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုစီးမျိုးဆက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အဆင့်မြင့် HDR / WCG visualization နှင့်, Ultra-တုံ့ပြန်မှု physical layer သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အစုစုထိပ်-Of-The စပ်အိုင်ပီ, 12K / UHD နှင့် HDR / WCG signal ကိုမျိုးဆက်, analysis နှင့်ဗီဒီယို / အသံစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျအကွာအဝေး Qx 4G ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်, rackmount RX အကွာအဝေး 3G အတွက်အစာရှောင်ခြင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်ရွေ့ရောဂါပေးပါသည် /HDဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ access ကို အသုံးပြု. -SDI ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ Ultra-ခရီးဆောင်တူရိယာတောင်းဆို applications များအဘို့, ကုမ္ပဏီကိုလည်းဆုရ Sx အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ PHABRIX ဗြိတိန်အတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများထိန်းသိမ်းထားသည်။ www.phabrix.com
IBC2017 မှာ PHABRIX ကိုကြည့်ပါ, ရပ် 10.B12
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/PHABRIX/170913PHABRIX.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/PHABRIX/PHABRIX-Sx-TAG-Hybrid-IP+SDI-Analyser-Generator.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: PHABRIX မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် SMPTE ယင်း၏ Sx TAG ခရီးဆောင်မီးစက် / Analyzer များအတွက် ST 2110 IP ကိုထောက်ခံကြောင်း။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=.@PHABRIXLTD%20highlights%20%23SMPTE%20%23ST2110%20Support%20for%20Sx%20TAG%20Portable%20Hybrid%20IP/SDI%20Generator%20and%20Analyser%20%23HybridIP%20-%20https://goo.gl/3C7DB5
2022-6 3G နှင့် Analogue ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ HD isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော optical SDI PHABRIX SD SDI SMPTE SMPTE ST 2110 SMPTE ST 2110 ပံ့ပိုးမှု SoftAtHome, MStar, CES2017 Sx TAG အိတ်ဆောင် Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-13
ယခင်: နယူးဒေတာများကို Bannister ရေကန်ရဲ့ Chameleon နှင့်အတူ Feeds ပါဝငျ
နောက်တစ်ခု: နယ်သာလန်နိုင်ငံ Fox Sports VIDELIO နှင့်အတူ၎င်း၏ပလေးအောက်ဌာနတိုးချဲ့
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "PHABRIX မီးမောင်းထိုးပြထားသည် SMPTE ST 2110 ပံ့ပိုးမှု Sx TAG အိတ်ဆောင် Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI Generator ကိုနှင့် Analyzer များအတွက်" ။ http://www.broadcastbeat.com/phabrix-highlights-smpte-st-2110-support-for-sx-tag-portable-hybrid-ipsdi-generator-and-analyser/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။